काका र फुचुङग्री (भाग १३) - NepaliEkta
13 October 2021 13 October 2021 Nepaliekta	0 Comments
541 जनाले पढ्नु भयो ।
फुचुंग्री :– काका ! दशैं आयो भन्छन्, घर रंगाउने होईन र ?
काका :– हो के र, रातो माटो कमेरो लिन जानु पर्ने, अझै वर्षात रोकिएको छैन । यो पालीको दशैं बर्खामास मै पर्ला जस्तो छ नानि ।
फुचुंग्री :– होइन काका ! बैद्य बाजे र बिजुक्छे बाजेले त राजा ल्याएर घर रंगाउने पो भन्दै छन त, अचम्मै परेँ म त, के हो यस्तो ?
काका :– सबै जना अचम्मै परेका छन् । कम्युनिस्टको नाममा जीवन गुजारेका यी बुढाहरु हरियो घाँसमा लुकेका सर्प रहेछन् । यति गिरेर बोल्लान भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् । चौतर्फी आलोचना भएको छ। सार्वजनिक माफी माग्नु पर्छ यि बुढाहरुले ।
फुचुंग्री :– त्यसो भए यस पालीको दशैंमा घर नरंगाउने र काका ?
काका :– घर रंगाउने कुरा नितान्त व्यक्तिगत पारिवारिक कुरा हो । आ–आफ्नो घर कसरि रंगाउने वा न रंगाउने आफ्नो आफ्नो विचार हो । बैद्य बाजे, बिजुक्छे बाजेले के भन्छन फरक पर्दैन । यसो त यो बर्खाले पनि छेक्दैन । सबैका घर रंगिन्छन् र दशैं पनि धुमधामले मनाइन्छ ।
फुचुंग्री :– दशैमा त बलि दिइन्छ नि काका, के यो सही हो र ?
काका :– हो नानि, दशैंमा लाखौंलाख बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा, पाडाको बलि दिइन्छ। यो गलत हो । हाम्रो परम्परा संकृतिमा अन्धाश्रद्धा अन्धविश्वास लुकेको छ । मासु खानलाई काटिने कुरामा हाम्रो विरोध छैन, धर्म आस्थाको नाउँमा बलि दिने चलन गलत हो ।
फुचुंग्री :– पोहोर दशैंमा मसालले बलि दिएका बोकाहरु फेरि व्युतिएर भेला गर्दै हिडेछन्, हिजो त गोरखपुरमा पनि भेला गरेछन् नि, यिनीहरू किन यसो गर्दैछन् काका ?
काका :– यसलाई मसालले बली दिएको भन्ने शब्द सही होइन, बरु मसालले अनुशासन उलंघन गर्ने अराजक गतिविधि गर्नेहरूको लागि केही समय को लागि कार्यबाही गरेको थियो भनिन्छ। सुरुमा आठौँ महाधिवेशन सम्पन्न हुँदासम्म राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेर पार्टी कब्जा गर्ने मनसाय रहेछ, अल्पमत परेपछि यिनीहरूको राजनैतिक प्रतिवेदन अर्को महाधिवेशनसम्म रिजर्व भयो, उनीहरू आत्तिए । त्यसपछि खुल्लम खुल्ला गुटबन्दी गालीगलौज विद्रोह गरी समानान्तर कमिटी गठनमा उत्रिए । त्यसैको थप कडी हो हिजोको गोरखपुर कथित मूल प्रवाह भेला । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कथित भेला अवैधानिक भएको भन्दै खारेज गरी सकेको छ ।
फुचुंग्री :– काका ¤ यिनीहरूले एकता वार्ताको स्वागत पनि गरेका छन्, समानान्तर कमिटी गठन गर्दै पनि हिँडेका छन्, नेपालमा नयाँ प्रकारको क्रान्ति नै गर्ने होलान र ?
काका :– उफ ! के के सोध्छे यो फुचुंग्रि पनि !
← भ्रममा नपर्न अपिल, मूल प्रवाहको आधिकारीक अध्यक्ष दुर्गा बहादुर केसी र महासचिव ठाकुर खनाल
सुकुम्बासी समस्या र समाधान →
20 October 2021 Nepaliekta 0